खाबी लेम कसरी टिकटकमा अत्यधिक चर्चित बने ?
28 Nov 2021 | आइतबार, १२ मंसिर, २०७८ | Edition : Nepal | UK | Australia
सोमबार, ८ कार्तिक, २०७८
एजेन्सी । खाबी लेम टिकटकमा सबैभन्दा चर्चित व्यक्तिको सूचीमा दोस्रो स्थानमा रहेका छन् । अमेरिकी नृत्याङ्गना चार्ली डी’अमेलियोपछि टिकटक प्रख्यातीको दोस्रो स्थानमा लेमको नाम दर्ता भएको छ । उनको टिकटक खातालाई ९० करोडभन्दा बढी व्यक्तिले फलो गर्छन् र त्यसमा उनले एक अर्ब ३० करोड लाइक पाएका छन् । कैयौ व्यक्तिहरुले लेमले अमेलियोलाई पनि उछिन्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
अमेलियो टिकटकमा एक अर्ब फलोअर पु¥याउने पहिलो व्यक्ति हुन । अहिले उनको एक अर्ब २० करोडभन्दा बढी फलोअर छन् । खाबी लेम पश्चिम अफ्रिकाको सेनगलमा जन्मिनु भएको हो । २१ वर्षीय लेमको अहिले इटलीमा बसाबास रहेको छ ।एक कारखानामा मजदुरका रूपमा काम गर्ने लेमले कोभिड१९ महामारीका कारण जागिर गुमाएपछि मार्च २०२० मा टिकटक चलाउन सुरु गरेका थिए।
लेमले अन्य मानिसले गरेको कुनै कार्यलाई तुलना गर्दै यस कार्यलाई कसरी सहजै गराउने भन्ने विषयलाई जोडेर आफ्नु भिडियो देखाउने गरेका छन् । बिनाकारण जटिल बनाएका छन् भनेर लेमले देखाउने गरेका छन् । तर भिडिओमा उनी बोल्दैनन् । उनको अनुहारको नाटकीय भावलाई देखेर मानिसहरूलाई रमाइलो मान्छन् अनि त्यो रमाइलो भएको कुरा थाहा पाउन कुनै भाषा जान्नुपर्दैन भन्ने पनि उनको भिडियोबाट झल्किन्छ ।
हालाण्डले बनाए कीर्तिमान
एजेन्सी । एर्लिङ हालाण्डले बुन्डेसलिगामा ५० गोल पूरा गर्ने सर्वाधिक कान्छा खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन् ।
भीम रावलको पर्चा बाँड्नेहरुलाई स्वयंसेवकले बाहिर निकाले
सौराह । नेकपा एमालेको नेतृत्वको लागि दावी प्रस्तुत गरेका नेता भीम रावलको पर्चा बाँड्नेहरुलाई महाधिवेशनका स्वयंसेवकहरुले बाहिर निकालेका छन्। सौराहमा जारी १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका केही प्रतिनिधिहरूला
भरियासँग बोकिएर पाथीभरा मन्दिर दर्शन गर्न जाँदै तीर्थयात्री
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म हिँडेर जान नसकेपछि भरियालाई बोकेर पाथीभरा मन्दिरमा दर्शन तथा पूजापाठ गर्न जाँदै तीर्थयात्री ।
मोटर बोटमा सयर
पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोगी बन्दै एमाले महाधिवेशन
वास्तुशास्त्र: पश्चिम तर्फ टाउको राखेर कहिल्यै सुत्नु हुँदैन, जान्नुहोस कारण !
एजेन्सी । आज वास्तुशास्त्रमा जान्नुहोस् पूर्व र पश्चिम दिशामा टाउको राखेर सुत्ने बारे। वास्तुशास्त्रका अनुसार पूर्व दिशामा टाउको राखेर सुत्नु राम्रो हुन्छ भने पश्चिममा टाउको राखेर सुत्नु हुँदैन ।
यस्ता छन् दिनहुँ पनिर खानुका फाइदाहरु
शनिबार यस्ता कामहरुको सुरुवात नगर्नुहोस्
दक्षिण अफ्रिकामा कोभिड–१९ को नयाँ ‘भेरिएन्ट’ भेटिएको वैज्ञानिकहरूको दावी
एजेन्सी । दक्षिण अफ्रिकाका वैज्ञानिकहरुले बिहीबार धेरै म्युटेसन भएको कोभिड–१९ नयाँ रूप पत्ता लागेको बताएका छन् । उनीहरुले दक्षिण अफ्रिकामा सङ्क्रमण सङ्ख्या बढ्नुलाई कोभिडको यही प्रकार दोषी रहेको बताएका छन् ।
युरोपमा कोरोनाका कारण मार्चसम्ममा थप ७ लाखको ज्यान जानसक्नेः विश्व स्वास्थ्य संगठन
भारतद्वारा प्राइभेट क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी
महान नेता नेल्सन मण्डेलाबारे यी कुराहरु धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ